प्रिय ‘भेडा जनता’लाई सभासद्को पत्र – Sajha Bisaunee
प्रिय ‘भेडा जनता’लाई सभासद्को पत्र
। ११ मंसिर २०७४, सोमबार १४:२८ मा प्रकाशित
प्रिय भेडा जनताहरू,
छोटो कार्यकालको लामो सम्झना ।
म यहाँ सन्चै छु । सन्चो भएर नै हजुरहरूलाई सानो पत्र लेख्दै छु । बरु प्रिय जनताको खबर के छ ? कस्तो छ ? भोको हुनुहुन्छ की नाङ्गो हुनुहुन्छ ? धारामा पानी आउँछ की आउँदैन ? घरमा बिजुली छ की छैन ? मोटरबाटो छ की छैन ? तपाईंका बालबालिका विद्यालय जान्छन् की जाँदैनन् ? के कस्तो छ प्रिय जनताको खबर ? यहाँ मलाई साह्रै चिन्ता लागेको छ । केही दिन भो प्रिय जनताको यादले सताइरहेको छ, एकोहोरो । रातमा निन्द्रा लाग्दैन, दिनमा भोक लाग्दैन् । यता गयो जनताकै पिरलो, उता गयो जनताकै पिरलो ।
अब यति भनेपछि प्रिय जनताले त बुझ्नु भयो होला क्यारे । मैले किन पत्र पठाएको र पत्रमा चिल्ला मिठा कुरा किन ग¥यो भनेर । प्रिय जनतालाई थाहै छ क्यारे, देशमा चुनावको माहोल छ भनेर । तर म मेरो लागि भोट माग्न पक्कै पनि यो पत्र लेखिरहेको छैन । आज म प्रिय जनतासँग यथार्थ कुरा गर्न चाहन्छु ।
वि.सं. २०७० सालको संविधानसभाको चुनाव अघि मैले प्रिय जनताका सामु विभिन्न भ्रम छरेकै हुँ, नानाथरीका आश्वासन दिएकै हुँ । घर–घरमा मोटरबाटो पु¥याइदिन्छुु, गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्यचौकी निर्माण गरिदिन्छु, विद्यालयहरू निर्माण गरिदिन्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु यी सबै भनेकै हुँ प्रिय जनतालाई ।
उक्त चुनावमा मैले जे बोलें, जे गरें, जुन आश्वासन दिएँ ती सब केवल चुनाव जित्नका लागि मात्र थिए । तपाईं भेडाजस्ता जनतालाई प्रयोग मात्र गरेको हुँ । यसमा मेरो कुनै गल्ती छैन । मैले बोलेको तर गर्न नसकेकोमा म कुनै माफी पनि माग्न पनि चाहन्न, किनकी मैले कुनै गलत गरेको छैन । मैले जे जाने त्यही गरें । मैले जे गर्नसक्छु त्यही गरिरहेको छु ।
वास्तविकता के हो भने वास्तवमा म सभासद् बन्न योग्य मान्छै नै हैन । न मैले केही गर्नसक्छु, न मसँग नयाँ ‘भिजन’ नै छ । न म सँग नेतृत्व गर्ने क्षमता छ, न मसँग विविध कुराको जानकारी नै । तर म यो चाहीं भन्न सक्छु की तपाईं जनता भनेको भेडा हो, भेडाको बीचमा म बाख्रो भइदिएको मात्र हो ।
प्रिय जनताहरू ! तपाईंहरू आफैमा परजीवी हुनुहुन्छ, तपाईंहरू आफैमा भेडा हुनुहुन्छ त तपाईंले छनौंट गरेको नेता कस्तो होला ? म जस्तो मान्छेलाई त तपाईंहरू नेता मान्नुहुन्छ त कसरी हुन्छ देशको विकास ? कसरी पाउँछ देशले परिवर्तन ? कसरी बन्छ नेपाल समृद्ध देश ? कसरी बन्छ ?
क्षणिक र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशको दिगो शान्ति र समृद्धि गुमाउने तपाईं जस्तो जनताले नै गर्दा देशले निकास पाउन नसकेको हो, देश विकासित हुन नसकेको हो । मैले २०७० मा चुनाव जित्दा पैसाले किनेको थिएँ तपाईं प्रिय जनतालाई, जसरी किनिन्छ बाख्रा र भेडाहरू । पैसामा बिकेर देशको भलो र समृद्धि कुल्चिने तपाईं जस्तो प्रिय जनतालाई मैले भेडा नभनेर के भनौं त गधा भनौं ?
२०७० को संविधानसभाको चुनावको प्रचार–प्रसारका लागि म एउटा गाउँमा गएको थिएँ । उक्त गाउँका प्रिय जनताको उपस्थितमा एउटा औपचारिक कार्यक्रम गरियो । उक्त कार्यक्रममा मैले बनावटी कुराहरू मात्र राखेको थिएँ । भ्रमात्मक र केवल आश्वासन खालका कुरा गरेको थिएँ । हाम्रो पार्टीले यस्तो ग¥यो, हाम्रो पार्टीले उस्तो ग¥यो र आगामी दिनहरूमा यसो गर्छ, उसो गर्छ भनेर मिलाएर भन्देको त गड्गडाहट ताली बजाइहाले । वास्तविक रूपमा हाम्रो पार्टीले के गरेको थियो र के गर्नसक्छ ? केही नबुझेर हावा तालमा हावा ताली बजाउने तपाईं जस्ता प्रिय जनतालाई भेडा नभनेर के भनौं त कुकुर भनौं ?
प्रिय जनता, तपाईंले मलाई भोट दिएको हो भन्दैमा आजभोलि ‘जेपीटी’ अर्थात् जे पाइयो त्यही भन्न मिल्दैन किनकी तपाईंको भोट मैले पैसाले किनेको हुँ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि व्यक्तिको वास्तविक क्षमता नबुझिकन दिएको भोटले कसरी भलो गर्नसक्छ ? कसरी देशको विकास हुनसक्छ ? असत्य कुनै पनि हालतमा फल्न सक्दैन ।
सत्य तितो हुन्छ । प्रिय जनतालाई तितो नलागोस् । वास्तवमा देशले अहिलेसम्म विकासको मोड लिन नसक्नु, देश सम्पन्नशाली हुन नसक्नु, विकासका प्रचूर सम्भावना भएर पनि विकसित हुन नसक्नुु यी सबै कुराको दोषको भागेदार प्रिय जनताहरू नै हो । प्रिय जनताको अप्रिय सोचले नै देशले यस्तो बिजोग अवस्था भोगिरहेको छ । पार्टीको ‘झोले’ भएर, आफ्नो भनाउँदो पार्टीको गलत कुरालाई पनि सही ठानेर विपक्षी पार्टीको सही कुरालाई पनि गलत रूपमा अथ्र्याउने तपाईं जस्ता प्रिय जनतालाई भेडा नभनेर के भनौं त स्याल भनौं ?
प्रिय जनताहरू, आज म आफैलाई पश्चाताप लागिरहेको छ, आत्मग्लानी भइरहेको छ की म जस्ता असक्षम र अयोग्य नेता जस्तै जस्तैले गर्दा देशले परिवर्तन पाउन सकेको छैन, देशले काँचुली फेर्न सकिरहेको छैन । प्रिय भेडा जनताहरूको गलत सोचाइ, प्रिय भेडा जनताले छनोट गरेको बाख्रा नेता र बाख्रा नेताले गरेको नेतृत्व यस्तै त हुन्छ नी । कठै वरै प्रिय भेडा जनता, कठै बरै म र बाख्रा साथीहरू, कठै बरै हाम्रो देश ।
धेरै पनि के लेखौं र ? अन्तमा म के भन्न चाहान्छु भने प्रिय जनताहरू, सर्वप्रथम तपाईं आफ्नो सोच बदल्नुहोस् त्यसपछि तपाई आफू स्वावलम्बी बन्नु्होस, अनि कुनै पनि चुनावमा पार्टीलाई हैन सक्षम व्यक्ति चुन्नुहोस् । त्यसपछि तपाईं राम्रो हुनुहुनेछ, अनि तपाईंको जीवन सुन्दर हुनेछ, त्यसपछि तपाईंको परिवार सम्पन्न हुनेछ, अनि समाज, वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै देश समृद्ध बन्नेछ, त्यसपछि गर्वका साथ भन्न पाइनेछ, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल ।
असक्षम र अयोग्य
प्रिय जनतालाई भ्रम र आश्वसन छरेर